Horudhac: Eibar vs Barcelona… (Kooxda Barca oo hoggaanka horyaalka La Liga kala wareegi karta Real Madrid) – Gool FM
Xiddig ka tirsan Kooxda Manchester United oo qarka u saaran inuu tago
Man United oo si raaxo leh ugu gudubtay wareega Shanaad ee FA Cup, kaddib markii ay garaacday kooxda Tranmere Rovers… +SAWIRRO
Samuel Eto’o oo saadaaliyay kooxda xilli ciyaaredkan ku guuleysan karta La Liga… (Ma Barcelona mise Real Madrid?)
Macallin Zidane oo ka hadlay xaaladda dhaawac ee Gareth Bale ka hor kulankooda caawa ay u safrayaan Real Valladolid
Maxay u baahan tahay Liverpool si ay u gaarto guulaha taariikhiga ah ee kooxaha Milan iyo Arsenal?
Man City oo u gudubtay wareega shanaad ee koobka FA Cup kaddib markii ay guul ka gaartay kooxda Fulham… +SAWIRRO
Kooxda Barcelona oo heshiis la gaartay da’yar reer Brazil ah… (Booskee ka ciyaaraa?)
Man United oo bilowday inay ka fikirto inay ceyriso macallinkeeda Solskjær & Tababaraha ugu cad-cad kuwa ay soo qaadanayso oo la sii ogaaday
“Shaqaalaha Manchester City oo dhan waxay adduunka ka raadinayaan badelka Aguero” – Guardiola
Mid ka mid ah bartilmaameedyadii ugu waynaa Man United oo si cad isaga diiday inuu u dhaqaaqo Old Trafford
Horudhac: Eibar vs Barcelona… (Kooxda Barca oo hoggaanka horyaalka La Liga kala wareegi karta Real Madrid)
Haaruun October 19, 2019
(Eibar) 19 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Eibar ayaa soo dhoweynaysa naadiga Barcelona duhurnimada maanta kulan ka tirsan horyaalka La Ligaha Spain.
Barcelona ayaa dib ugu soo laabanaysa maanta ciyaarista horyaalka La Liga kaddib ciyaaraha caalamiga ah, waxaana ay u safrayaan naadiga Eibar.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Spain ayaa doonaysa inay difaacato horyaalka La Liga, waxaana haatan ay kaliya labo dhibcood ka dambeeyaan hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Real Madrid kaddib siddeed kulan oo la ciyaaray.
Wiilasha uu hoggaamiyo macallin Ernesto Valverde ayaa kalsooni ku qaba inay guul soo gaari doonaan kulanka maanta, laakiin waxaan meesha laga saari karin in Eibar aan laga adkaan afartii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay horyaalka.
Guul ay Barcelona ka gaarto Eibar ayaa ka dhigan inay hal dhibic si ku meel gaar ah hoggaanka horyaalka La Liga kala wareegi karto Los Blancos, maadaama uu kulankan u horreeyo kulammada horyaalka Spain ee maanta la ciyaari doono.
Taariikhda: Sabti, 19 Okt 2019
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 2:00 Duhunnimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Mario Melero Lopez (Spain)
Garoonka: Ipurua Municipal Stadium
Gonzalo Escalante ayaa ganaax ku maqnaan doona kulankan, kaddib markii laga saaray ciyaartii ay wajaheen naadiga Real Betis.
Jose Angel iyo Anaitz Arbilla ayaa labadaba la filayaa inay ku soo bilowdaan kulankan, kaddib dhaawacyo ay la maqnaayeen ka hor ciyaaraha heerka caalami ee xulalka.
Kike Garcia ayaa hoggaamin karta safka kooxda martigeliyayaasha ah, iyadoo Edu Exposito uu yahay xiddig kale oo ku soo bilaaban doona khadka dhexe.
Kooxda Barcelona ayaa ganaax ku wayn doonta Gerard Pique, Ousmane Dembele iyo Ronald Araujo.
Natiijadaas ayaan ka dhigan in Clement Lenglet oo qalbadda dhexe ee daafaca kulankan la wadaagi doono Jean-Clair Todibo, daafaca Samuel Umtiti ayaa ku dhow inuu ka soo laabto dhaawac uu la maqnaa, waxaana uu noqon karaa dooq kale oo halkaan jooga.
Jordi Alba ayaa taam buuxa ah kaddib dhaawac uu la maqnaa, waxaana uu ku soo bilaabanayaa daafaca garabka bidix, halka Nelson Semedo uu ka soo muuqan doono dambeedka midig ee daafaca.
>- Kooxda Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 10-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday naadiga Eibar tartammada oo dhan.
>- Barcelona ayaa guulaysatay labadaba qeybta hore iyo ciyaarta oo dhammaystiran saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo ciyaartay horyaalka La Ligaha Spain.
>- Barcelona ayaan la garaacin tobankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay kooxda Eibar tartammada oo dhan.
>- Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool lix ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay dheeshay horyaalka La Liga.
“Shaqsiyaad qaar ee kooxda Barcelona ah ma aysan dooneynin in Neymar uu soo laabto” – Messi
Horudhac: Chelsea vs Newcastle United... (Kooxda macallin Steve Bruce oo doonaysa inay Blues mariso wadadii Man United)